Abaanduulihii ciidanka Somaliland ee gobolka Cayn oo is-casilay. – Radio Daljir
Janaayo 12, 2011 12:00 b 0
Buuhoodle, Jan 12 – Waxaa maanta iska casiley xilkii uu u hayey maamulka Somaliland Abaanduulaha Ciidamada Somaliland ugu magacawnaa Gobolka Cayn C/fitaax Maxamuud Jaamac kadib markii uu sheegay in Madaxweynaha Somaliland uu soo saaray war saxaafadeed uu ku sheegay in deegaanada Kalshaale, Maygaagle Iyo Hagoogane laga dhigayo xero ciidan oo ay degaan ciidamada Somaliland.
Waraysi – C/fitaax M. Jaamac [Dhegaysi …]
C/fitaax Maxamuud Jaamac oo maanta la hadlay Idaacada Daljir ayaa sheegay in gebi ahaanba uu iska casiley xilkii uu u hayey maamulka Somaliland; waxaa kale oo uu sheegay in ciidamdii deegaanka ahaa ee mushahaarka ka qaadan jirey maamulkaasi ay gebi ahaanba ka baxeen maamulkaasi, islamarkaana ay la siyaasad iyo mawfiqba yihiin dadweynaha gobolka Cayn.
Abaanduulaha oo maanta ku booqday halka ay ku sugan yihiin ciidamadiisu ayaa sheegay in uu ka soo horjeedo damaca qallafsan ee maamulka Somaliland.
C/fitaax waxaa kale oo uu sheegay in isaga iyo ciidamadiisuba ay diyaar u yihiin difaacadida deegaanka hadii maamulka Somaliland ciidamadiisu ka bixi waayaan deegaanada ay hada ku sugan yihiin ee gobolka Cayn.
Isku soo wada duub oo, tallaabada uu qaaday sarkaalkan ciidan ayaa ah mid dadweynaha ku nool gobolka Cayn ay si weyn u soo dhaweeyeen; waxaana ay ku soo beegmaysaa xili dadweynaha gobolka Cayn ay u diyaar garoobeen difaaca dhulka ay kaga sugan yihiin gobolka Cayn ciidamo beeleedyo taabcsan Somaliland oo markii hore ku soo galay qaab dhexdhexaadnimo kadib dagaal ka dhacay deegaanka Kalshaale, balse loo arko xilligan in ay u muuqdaan kuwo dhinaca bariga Burco la safan waa sida ay sheegeen waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Buuhoodle.
Idaacada Daljir, Buuhoodle.